स्वास्थ्यकर्मी डराउनुपर्ने देशमा सुरक्षित बिरामीको कल्पना! – Health Post Nepal
स्वास्थ्यकर्मी डराउनुपर्ने देशमा सुरक्षित बिरामीको कल्पना!
२०७७ असोज १ गते १७:२२
आज सेप्टेम्बर १६ अर्थात ‘विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सन् २०१६ देखि विशेष प्रसंग र नारा बनाई यो दिवस मनाउने गरेको छ।
यस वर्षको प्रसंग ‘स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा : बिरामीको सुरक्षाको प्राथमिकता’ र नारा भने ‘सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षित बिरामी’ रहेको छ।
यही प्रसंग र नारामा केन्द्रित भएर विश्वका सबै राष्ट्रले यो दिवस मनाउँदै आएका छन्।
तर, दिवस मनाइरहँदा नेपाली डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी भने खुसी छैनन्।
विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विभिन्न चुनौती खडा भएको छ। यो परिस्थितिमा बिरामीमात्र नभई स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिममा परेका छन्। तर, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो स्वास्थ्य संगठनका पदाधिकारीहरूको छ।
महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हातपातदेखि सामाजिक दुर्व्यवहार र विभेदसमेत उनीहरूले भोग्दै आएका छन्।
अहिलेको यो कोरोना कहरको अवस्थामा बिरामी सुरक्षित पार्न सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन्।
तर, अहिले यो सन्दर्भमा सरकारले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्न नसकेको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सरकारले आज बेलुका दीप प्रज्वलन गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। तर, संगठनका पदाधिकारीहरू दीपावली गरेर दिवस मनाउने भन्दा पनि सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
एकातिर अहिले स्वास्थ्यकर्मीको चित्तबुझ्दो सेवासुविधा छैन, अर्कोतिर सुरक्षा अनुभूति।
‘संसारभर नै अहिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद भइरहेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन सकेको छैन,’ अध्यक्ष डा. कार्कीले भने, ‘बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई आफन्तबाट नै कुटपिट भइरहेको घटना हाम्रासामु घटिरहेका छन्। यो दुःखद पक्ष हो।’
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे कोरोना महामारीमा दिनरात खटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले कुनै सेवा–सुविधा दिन नसकेको बताउँछन्।
‘नारामा उल्लेख भएअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, सेवासुविधा खोइ? निजी अस्पतालबाट सयौं संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीलाई निकालिएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘यातायत खर्च र न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्न स्वास्थ्यकर्मी बाध्य छन्। खोइ त सरकारले उनीहरूको सेवासुविधाको प्रत्याभूति गर्न सकेको?’
कोरोना उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले अहिले पनि जोखिम भत्ता पाइरहेका छैनन्।
सरकारले मापदण्ड बनाउँदा पनि सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्न सकेन। बनेको मापदण्डअनुसार नै जोखिम भत्ता उपलब्ध भएको नभएको बताउँदै नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्मा थप्छन्, ‘यही हो सरकारले गर्ने दायित्व।’
स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको सुरक्षामा सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको सर्वसाधारण र स्वास्थ्यकर्मीलाई कुनै अनुभूति नभएको शर्माको भनाइ छ।
त्यसैगरी, सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. रविन खड्काले स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत, पेसागत र सामाजिक सुरक्षामा कुनै पनि प्रत्याभूति हुन नसकेको बताए।
‘व्यक्तिगत रूपमा कार्यस्थलमा हातपात हुने घटना अझै कायमै छन्। पेसागत रूपमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको वृद्धि–विकास, तालिम र पेसागत सीपको अभिवृद्धि हुन सकेको छैन,’ खड्काले भने, ‘अझै सामाजिक हिसाबमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाको सम्बोधन हुन सकेको छैन।’
अस्पतालमा स–साना घटना केही भयो कि तोडफोड हुने र स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै आक्रमण भइहाल्ने गरेको यथार्थता रहेको डा. कार्की बताउँछन्।
‘अस्पतालमा ‘असुरक्षित’ महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ, डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न हुँदा हातपात गर्ने जोसुकैलाई पनि बिना जमानत जेल अर्थात ‘जेल विद्आउट विल’को माग रहेका छांै,’ डा. कार्कीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कानुन आएको छैन।’
बिरामीको उपचार पनि डराएर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डा. कार्कीको भोगाइ छ।
‘स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित रहनका लागि सबैभन्दा पहिला कानुन नै चाहिन्छ। जसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ,’ डा. कार्की थप्छन्, ‘ड्युटीका बेलामा हातपात तथा दुव्र्यवहार गर्ने जो–कोहीलाई सुरक्षाकर्मीसरह हातपात गरेको सजाय दिनुपर्छ।’
सरकारले स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित राख्ने विषय नारामा मात्र सीमित गरेको घिमिरेको जिकिर छ।
‘नारा त राम्रो–राम्रो बनाएको छ। तर, व्यवहारमा जसरी परिर्वतन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेको छैन,’ उनले भने।
‘स्वास्थ्यकर्मीलाई न सुरक्षा सामग्री दिन सकेको छ, न त सुरक्षाको प्रत्याभूति। यो महामारीमा त जोखिम भत्ता र उत्प्रेरित भएर काम गर्नसक्ने वातावरण दिनुपर्ने हो। तर यी सबै कुराको कुनै प्रत्याभूति गराउन नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको नाममा बत्ती बालेर के अर्थ राख्छ र?’ शर्मा प्रश्न गर्छन्।
‘आज सुरक्षा सामग्रीको अभावमा १ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्,’ शर्माले भने, ‘बरू दीपावलीको सट्टा कम्तीमा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भए स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा बढ्थ्यो कि?’
स्वास्थ्यकर्मीलाई मापदण्डअनुसार काम गर्ने वातावरण नभएको घिमिरेको भनाइ छ। ‘एउटै अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कहिले कोभिड कहिले त नन-कोभिडमा वार्डमा गएर काम गरिएका छन्,’ घिमिरेले सुनाए, ‘सरकार स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरिक्षत राख्नुपर्छ भन्ने नारामा भन्छ तर, व्यवहारमा काम गर्दैन।’
विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस